अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइनँ ! « Etajakhabar
अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइनँ !
काठमाडौ । संसद विघटनका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपरको वहस जारी छ । अब केही दिनमै त्यसको फैसला आउने क्रममा छ । तर यस्तो अवस्थामा अचानक प्रधानसेनापतिले प्रधानन्यायधीसलाई भेट गरेको समाचारले तरंग उत्पन्न गराएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सोमवार अदालतमै पुगेर भेटेका छन् । उनीहरुको यो भेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अहिले ओली र आन्दोलनरत नेकपाको समुह सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छन् । दुवै समुहले आफ्नै पक्षमा फैसला आउने दावी गरिरहेका छन् । राजनीतिक माहौल निकै तातेको बेलामा सेना प्रमुख र प्रधानन्यायाधीस बीचको भेटलाई चासोका साथ हेरिएको हो ।
तर, दुई जनाको भेट कुनै राजनीतिक कुराको लागि नभएको नेपाली सेनाले दावी गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सेनापति र प्रधान न्यायाधीश बिच भेट भएको पुष्टि गर्दै त्यसलाई अराजनीतिक भनेका छन्। नेपाली सेनाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको विषयमा छलफल गर्न प्रधान सेनापति सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताए।
सेनाले अदालतको ४० रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ। त्यसैको विषयमा छलफल गर्न सेनापति गएको उनको भनाई छ ।
यसै क्रममा आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचारले लेखेको छ कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा टाइमिङ र स्पेसको महत्त्व कति हुन्छ यसबारे प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानकार नहुने कुरै भएन । नेपाली सेनामा त यसबारे पढाउने र सिकाउनेसमेत गरिन्छ । तैपनि सेनापति थापाले सोमबरा दिउँसो यो विषयलाई खासै मतलब राख्न चाहेनन्, जसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
सोमबार दिउँसो करिब सवा १ बजे थापा जंगी अड्डाबाट निस्केर नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग करिब १ घण्टा भेटवार्ता गरे । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिनुपर्ने निर्णायक द’बाब परिरहेको बेला सेनापति अन्य कारण देखाउँदै अदालतभित्र छिरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वरक्षामन्त्री, सुरक्षाविद्लगायतले त्यसलाई संवेदनशील समयको रहस्यमय एवम् अर्थपूर्ण भेटको संज्ञा दिएका छन् ।